Basa rezvemagariro - Chengdu Silike Technology Co, Ltd.
Ramba uchienderera mberi nekusimudzira uye ubatsire neruzhinji
Chengdu Silike Technology Co, Ltd. inotevedzera kune pfungwa yekuchengetedza iyo ecological nharaunda, kusimudzira zvine hutano uye zvakasvibirira kusimudzira, uye kubatsira neruzhinji ruzhinji kuita zviitiko. Zvinotora kusimudzira kwakasimba uye girini ecology sechinhu chinodiwa mukugadzirwa kwechigadzirwa uye kugadzirwa, uye inoshandisa zvinogadziriswazve uye zvakasvibirira zvinhu zvekuvandudza chigadzirwa uye kugadzirwa. Ronga nhengo dzese kutora chikamu muzviitiko zvekudyara miti paZuva reZviruva regore, uye nekushingairira kupindura kune yakasvibirira pfungwa, kutora chinhanho kutora chikamu muhupfumi hweveruzhinji sechinhu chakakosha zvemukati uye chakanangana nekuzadzikisa basa revanhu, uye vakapinda mukubatsira kwechirwere uye zvimwe zviitiko. kwenguva zhinji kusimbisa nzanga yemakambani pfungwa yekutarisira.
Sense yekuchengetedzeka munharaunda
Silike anogara achitenda zvakasimba kuti kuvimbika ndiko kwakadzika mutsika, hwaro hwekuteerera mutemo, mitemo yekudyidzana munharaunda, uye fungidziro yekuwirirana. Isu tinogara tichitora kusimbiswa kwekuziva kwehunhu sechinhu chinodiwa pakuvandudzwa kwemakambani, kushanda nekuvimbika, kukura nekuvimbika, kubata vanhu nekuvimbika, kusimudzira kutendeka senge tsika yemubatanidzwa kuvaka nzanga inowirirana.
Isu tinogara tichiita iyo "vanhu-yakatarisana" musimboti, kuwedzera kuvandudza uye kushandiswa kwevanhu zviwanikwa vachiri kuvandudza kambani, kuwedzera sumo, kuchengetedza uye kudzidzisa kwemakiyi epamoyo matarenda, kupa mikana uye mapuratifomu ekukura kwevashandi, uye nekupa yakanaka yemakwikwi nharaunda. Yekusimudzira kwevashandi, Kukurudzira kukura kwakajairika kwevashandi nekambani, uye kujairana nekusimudzira enharaunda nguva